Mibvunzo mishanu Yekutarisa Kutengesa Kwako uye Kushambadzira Kuenderana | Martech Zone
Ichi chirevo chakanyatsomira neni pasvondo rapfuura:
Chinangwa chekushambadzira ndechekuti kutengesa kusanyanya. Chinangwa chekushambadzira ndechekuziva uye kunzwisisa mutengi zvakanyanya zvekuti icho chigadzirwa kana sevhisi zvinomukwanira uye kuzvitengesa pachako. Peter Drucker
Ne zviwanikwa zvichidzikira uye mutoro webasa uchiwedzera kune wepakati mushambadzi, zvakaoma kuchengetedza chinangwa cheako wekushambadzira kuyedza kumusoro kwepfungwa. Mazuva ese isu tinosangana nenyaya dzevashandi, kurwiswa kwemaemail, nguva dzakatarwa, bhajeti… vese vanokanganisa kubva pane chakakosha kubhizinesi rine hutano.
Kana iwe uchida yako yekushambadzira kuyedza kubhadhara, iwe unofanirwa kuongorora chirongwa chako nguva dzose uye chengeta uri pamusoro pekuti zviwanikwa zvako zviri kushandiswa sei. Heano mibvunzo mishanu yekubatsira kukutungamira kuchirongwa chinobudirira chekushambadzira:
Ndivo vashandi vanotarisana nevatengi vako, kana mamaneja avo, uchiziva nezve mameseji auri kutaurirana nehurongwa hwako hwekutengesa? Izvo zvakakosha, kunyanya nevatengi vako vatsva, kuti vashandi vako vanzwisise tarisiro dzakatarwa mukati mekushambadzira nekutengesa maitiro. Kupfuura zvinotarisirwa kunoita kuti vatengi vafare.
Chirongwa chako chekushambadzira zvichiita kuti zvive nyore kune vashandi vako vekutengesa kutengesa chigadzirwa chako kana sevhisi? Kana zvisiri, iwe unofanirwa kuongorora mabheji emigwagwa ekuwedzera kushandura mutengi uye nekuisa nzira dzekuakunda.
Ndiwo wega, timu uye dhipatimendi zvinangwa musangano rako rese zvinoenderana nekushambadzira kwako kana kunetsana navo? Muenzaniso wakajairika ikambani inoisa zvibodzwa zvibereko zvevashandi izvo zvinoderedza hunhu hwebasa revatengi, nokudaro zvichideredza yako yekuchengetedza kushambadzira.
Iwe unokwanisa here kuyera iyo dzoka pakushambadzira mari kune yega yega nzira dzako? Vatengesi vazhinji vanokwezvwa nezvinhu zvinopenya pane kuyera uye kunzwisisa chaizvo zviri kushanda. Isu tinowanzo kukweva kushanda isu se kuita pane kuita basa rinonunura.
Wakavaka iyo process mepu enzira dzako dzekutengesa? Mepu yekuita inotanga nekukamura tarisiro yako nekukura, maindasitiri kana sosi… wozotsanangura zvinodiwa nezvipikiso zvega zvega… wozoshandisa nzira yekuyera inokodzera yekudzosera mhedzisiro kuzvinangwa zvishoma zvepakati.
Kupa iyi nhanho yedudziro muchirongwa chako chekushambadzira chinozovhura maziso ako kumakakatanwa nemikana mukati mekambani yako yekutengesa nzira. Iko kuedza kwaunofanira kuita nekukurumidza kwete kupfuura gare gare!
Tags: kuenzanisavashandikushambadzira kwemukatikuenderana kwekushambadzirakushambadzira nekutengesakushambadzira kunetsanakushambadzira chinangwa kuenderanakushambadzira zvinangwaMarketing nzirakunangiswa kwemesejiPeter Druckerpeter drucker quotekuenderana kwekutengesakutengesa uye kushambadziraKugonesa Kugonesakutengesa kushambadzira
Kutaura kwako mutauro wangu. Handisati ndambonzwisisa kuti sei vanhu vasina maitiro uye nenzira iyo karenda isiri maitiro. Maitiro anoshanda sekureba sekuvandudzwa uye kugara achigadziriswa. Vanhu vanorega zvirinyore mukuyedza kukudziridza imwe uye kunyara kweizvozvo zvese; Ndeapi mazano akanaka anoparadzwa nekuda kwemaitiro asina kunaka?
Zvakanaka kutumira! Kunyanya, paunenge uchifunga seni! :)
Uku ndiko kufamba kukuru kuburikidza nechero nzira yekutengesa. Ndiri parizvino kutsvaga nzira nyowani dzekushambadzira kukambani yangu uye handina chaiyo yekutengesa kumashure. Iyi blog chishandiso chikuru kwandiri.
Nhamba yechipiri yakakosha pakuzadzisa zvinangwa zvekutengesa. Ndakaona nzvimbo dzavaidaidza kushambadzira, timu yekudzivirira yekutengesa!
Chitaurwa chaVaDrucker, neruremekedzo, chidiki myopic. Kana hurukuro yacho ikave:
? iyo chinangwa chekutengesa, saka, chingave kuita kuti kushambadzira kuve kwakanyanya? Chinangwa chekutengesa ndechekuenderana nemutengi zvakanyatsonaka zvekuti chigadzirwa kana sevhisi hazvidi kutengeswa?
- Hapana yemhedzisiro